Samaynta daruuraha Cirrus iyo noocyada | Saadaasha Shabakadda
Tan iyo markii uu ka soo bilawday, male-awaalka aadamuhu wuu isku dayay, welina wuu sii wadaa, inuu qaabeeyo daruuraha, si uu u arko jilayaal sheekooyin ama halyeeyo cirka ka jira. The cirrus Waxay yihiin nooc daruur ah oo aad noogu fudud, maaddaama aan si muuqata u arki karno sannadka oo dhan, sidaa darteed waxaa la dhihi karaa waxay nala socdaan maalin-maalmeedkeenna.
Hadda, sidee loo aasaasay iyo noocyo jira ayaa jira? Soo ogow.
Daruuraha Cirrus, ama sida fiican loogu yaqaanno cirrishka Isbaanishka, waa nooc daruur ah in wuxuu ka kooban yahay kiristaalo baraf ah, maadaama ay heer kul ka yihiin 40 darajo eber ka hooseeya. Waxay ka soo muuqdaan meelaha sare, inta u dhexeysa 8 iyo 12 km, si diyaarad, marka ay ka gudbeyso ay si fudud u qaabeyn karto, halka rakaabka ay u adkeysanayaan jahwareerka yar. Laakiin inkasta oo wax waliba jiraan, haddana waa daruuro aad u xiiso badan, waa hagaag waxay dabiyaan kuleylka, laakiin waxay kaloo muujiyaan iftiinka qoraxda.
Markaad ku aragto cirka, gaar ahaan hadday tahay xagaa oo ay muddo dheer qaadatay hal dhibic la'aan, waa waqtigii lagu farxi lahaa: badiyaa waa calaamadaha nidaamka hore, ama xitaa duufaan Laakiin haddii aad aragto inay jiraan lakabyo waaweyn ... ka fogow, maaddaama qaababkani ay la socdaan duufaanno.
Waxaa jira dhowr nooc oo cirrus ah, sida:
Sidaan soo sheegnay, waa daruuraha noocaas ah oo aadan ka daalin inaad aragtid. Waxay qaataan qaabab aad u layaab badan, oo mudan in lagu soo qabto kaamirada. Waxay sidoo kale maskaxda ku casuumaan inay mashquuliyaan oo ay ka jaraan, waa wax aan waxyeello u geysanaynin waqti ka waqti, sax? 😉
Maxaad u maleyneysaa daruuraha cirrus? Miyay sidoo kale ku xasuusinayaan mararka qaarkood wax jira - dhab ah ama mala-awaal ah - oo aad ku aragtay telefishanno, buugaag ama joornaallo?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Daruuraha cirrus, xiisaha badan